Akanjo Yoga Womens |
Akanjo fitambarana bodybuilding anti-bakteria miady amin'ny bakteria
85% Polyester & 15% Spandex, azafady mifidiana hotexy_retailer alohan'ny hidirana anaty sarety, mpivarotra hafa mpivarotra ambongadiny.
Toetoetra:Fanjaitra efatra sy fanjairana enina no manome fanohanana avo lenta hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany.
Material:Golden Ratio namboarina fabiric mahatonga fitaovana maivana-malefaka & Wick hiala hamandoana & hanatsara ny airflow.
Fatra fandrefesana:Manaova S, (pataloha) Halavany: 34.6inch, andilany: 24.4inch, Hip: 29.1inch; (Top) Bust: 29.5inch, andilany: 25.5inch.
Ny setiam-panatanjahan-tena dia mety amin'ny yoga, hazakazaka, gym, bisikileta sns.
Pads tsy azo sakanana ara-pihetseham-po marevaka ara-tontolo iainana miakanjo vehivavy manao akanjo legging
Mety amin'ny hazakazaka, yoga, fanatanjahan-tena mitsambikina, fitaovana fanatanjahan-tena ary karazana fiofanana ara-batana hafa.
Yoga malaso haingam-pandeha haingam-pandeha avo yoga mitafy akanjo fanatanjahan-tena ho an'ny vehivavy
asa: Maina, tohana ambony, tsy misy Jereo
Size: Iraisam-pirenena XXS-XXXL, US 2-14, EU 32-46, AU 4-14
Famantarana: Fanontana efijery, pirinty silikika, amboradara, sublimate, famindrana hafanana sns.
Akanjo yoga 2 sotera fanatanjahan-tena tsy misy fantsom-baovaom-panatanjahan-tena mitafy akanjo ambony gym
Ny yoga mirindra tsara ho an'ny vehivavy dia mahatonga anao ho mahia. Ny leggings lava volo miaraka amin'ny fehikibo misy tadiny dia manome fanohanana lehibe sy manatsara ny endrikao, manome anao akaiky kokoa. Ny tampon'ny vokatra sy mahaliana dia manintona sy miloko ary manaingo kokoa ity fanatanjahan-tena ity.
Fiara fitondra miisa 2 no napetraka, akanjo mavitrika ho an'ny aerobika sy fanatanjahan-tena anaerobika
fotoana: gym, écouteur, hazakazaka, jogging, yoga, ady totohondry, hetsika ara-panatanjahantena
Vehivavy fanatanjahan-tena avo lenta fametahana leggings mihazakazaka fanaovana spaoro Fitness Yoga Pants
MAHAFINY & MAFY: Ireo lamba fanatanjahan-tena ireo dia manome fofonaina tsara, rehefa lena, afaka mamono haingana ny hamandoana hiala ny hoditra izy ireo, mitazona anao ho maina foana. Ankoatr'izay, ny fitaovana dia malefaka be amin'ny fikasihana, saika azo ampitahaina amin'ny volon'ondry tena malama. Mifanentana toy ny fonon-tànana fa tsy mifanindry mihintsy!Tonga lafatra ho an'ny yoga, fanatanjahan-tena, hazakazaka, dihy Zumba, tokantrano ary fotoana hafa.
Haingam-pandeha maina ny loko malemilem-behivavy miakanjo akanjo fitafiana fampihetseham-batana Yoga Fitness Wear
Ny setian'ny akanjo fampihetseham-batana dia mety amin'ny yoga, hazakazaka, gym, bisikileta sns.
Akanjo lamaody mamy hoditra mamy-jaza manao fanatanjahan-tena manao akanjo milomano fehin-kibo yoga napetraka
Ny lamba tsy mahita, mamaky ny hamandoana, mifoka rivotra ary mivelatra dia manome fandrakofana feno
Stretch nylon Fabric - Mety tsara amin'ny yoga, fanatanjahan-tena, fanatanjahan-tena, karazana fampihetseham-batana, na fampiasana isan'andro
Fampiononana sy fitafiana - Ny legging yoga dia misy koa ny seams interlock rehetra mba hampihenana ny fahasosorana
ary manafoana ny fikorontanana, mamela ny fampiononana sy ny fahaizan'ny akanjo ambony indrindra
Fampihetseham-batana / fanatanjahan-tena iray habe mifanaraka amin'ny akanjo lava mitafy yoga vehivavy
Fampaherezana sy fitafy - ny legging yoga dia misy koa ny seams interlock rehetra mba hampihenana ny fahasosorana sy hanafoanana ny fikorontanana, ahafahana mahazo fiononana sy akanjo ambony
Leggings tsara indrindra vita amin'ny gym tsara tarehy yoga napetraka ho an'ny vehivavy
TOROHEVITRA avo sy fifehezana TUMMY:Raha ampitahaina amin'ny maodely 2019, ny capris yoga vehivavy vaovao dia noforonina tamin'ny fehin-kibo avo kokoa ho an'ny fifehezana ny tummy tsara kokoa, manome ny fanohanana sy ny famoretana ho an'ny kibonao sy ny vodinao hiverina amin'ny endriny voalohany izy io. Manao veloma an'i muffin top ary ho tsara kokoa aminao.
Mora miaina afaka manao akanjo fanatanjahan-tena ho an'ny yoga gym
KEVITRA: Nylon 60% + polyester 35% + spandex 5, lamba fanamainana haingana; Elastika avo, marevaka amin'ny hoditra, hatevin'ny antonony, famosana ny hamandoana ary maina haingana. 4-lalana mihinjitra fitaovana hampiroborobo ny malefaka sy ny famatrarana.
Fitaovana feno lamba mihanjahanja tsy hita maso amin'ny alàlan'ny Womens Sport Yoga Set
【Fitaovana sy habe】 nylon + polyester + spandex Size: mahazatra US, Ireo leggings tsy misy fangarony dia mandeha amin'ny halehibeny.
Technology Teknolojia tsy misy fotony】 Mahazo aina kokoa sy tsy mahita amin'ny alàlan'ny & Fitambarana haingam-pandeha (matevina ampy misy rivotra).
【Leggings Workout avo lenta】 Manasongadina lamba faran'izay avo lenta indrindra izay mioritra amin'ny fiolananay ary manatsara ny endrika voajanahary amin'ny andilanao.
【Porofon'ny squat】 Toplook Sealless Yoga Pants Squat Proof, Butt Lift, tonga lafatra amin'ny gym, yoga, fanatanjahan-tena, fampihetseham-batana, karazana fampihetseham-batana, na fampiasana isan'andro.